Yiyiphi "iindaba eziphambili" kwi-Journalism?
Yithini iNdaba yeCaptain Breaking?
Indlela yokuKhusela iindaba zokuLahla
Iindaba ezahlukileyo zibhekisela kwiziganeko ezikhoyo ngoku, okanye "ukuphula." Iindaba eziphulaphulayo zibhekisela kwiziganeko ezingalindelekanga, ezifana nokuphahlazeka kwendiza okanye ukutsha komlilo.
Ugubungela ibali leendaba eziphulaphulayo - ukudubula, umlilo , ingqungquthela - ingaba nayiphi na into. Uninzi lwezikhululo zeendaba zifakela into efanayo, ngoko kukho ukukhuphisana okukhulu kokufumana ibali kuqala.
Kodwa nawe kufuneka ufumane okulungileyo.
Ingxaki kukuba, ukuwaphula iindaba zamabakala zixhaphake kakhulu kwaye zidideke ukufihla. Kwaye kaninzi, amajelo eendaba ngokukhawuleza ekugqibeleni aphephe ukubika izinto eziba ziphosakeleyo.
Umzekelo, ngoJan. 8, 2011, uGeorge Giffords wayexinzeleleke kakhulu ekudutshulweni kwamatye eTuscon, eAriz. Ezinye zezona zizwe zihlonishwa kakhulu, kuquka iNPR, CNN kunye neNew York Times, ngokungathandekiyo ukuba uGiffords wafa.
Kwaye kwixesha ledijithali, ulwazi olubi lusasazeka ngokukhawuleza xa abathatheli bebekezela ukuhlaziya okungahambiyo kwi-Twitter okanye kwi-media media. Kwimbali yeGiffords, iNPR ithumele isilumkiso se-imeyile ethi i-congresswoman ifile, kwaye umhleli we-NPR wezokuhlalisana weendaba zoluntu uthetha into efanayo kwiimgidi zabantu base Twitter .
Ukubhala ngomhla wokugqibela
Ngethuba lobudala beendaba zedijithali, ibali leendaba eziqhelekileyo zihlala zixesha elide, kunye neentatheli zikhawuleza ukufumana amabali e-intanethi.
Nazi ezinye izicwangciso zokubhalwa kweendaba kwixesha lokugqibela:
• Qinisekisa ii-akhawunti zokuzibonela ngamagunya. Ziyamangalisa kwaye zenza ikhophi ephoqelekileyo, kodwa kwi-chaos eqhubekayo into efana neyokudubula, abagadi beentlanzi abaxhatshazwayo bahlale bengathembeki.
Kulokudutshulwa kweGiffords, omnye umntu ozibonela ngamehlo echazwe ebona i-congresswoman "yanyuka ekhoneni kunye nenxeba ebonakalayo yebhosti entloko.
Wayephefumula ebusweni bakhe. "Ekugqibeleni, oko kuzwakala ngathi inkcazo yomntu ofile. Kule meko, ngethamsanqa, kwakungekho.
• Ungababi kwezinye iindaba. Xa i-NPR ibixelele ukuba uGiffords ufile, enye imibutho ilandelekile. Njalo yenza okokuqala ingxelo yakho yesandla.
• Ungaze wenze izigqibo. Ukuba ubona umntu olimala kakhulu kulula ukucinga ukuba bafile. Kodwa kubanyathelisi, iingcamango zihlala zilandela uMthetho kaMurphy: Ngenye ixesha ucinga ukuba into enokuthi ibe yinto enye engeyiyo ikhefu.
• Ungaze ucacise. Abemi babucala banokuzicingela ngeembali zeendaba. Iindaba zentatheli azinjalo, kuba sinembopheleleko enkulu: Ukubika inyaniso.
Ukufumana ulwazi ngebali lokuphula, ngokukodwa enye intatheli ayizange ibonwe yedwa, iquka ukufumana izinto ezivela kwimithombo . Kodwa imithombo ingalunganga. Enyanisweni, i-NPR isekelwe ingxelo yayo ephosakeleyo malunga neGiffords kwiinkcukacha ezimbi ezivela kwimithombo.
Iindlela ezili-10 zokuqinisekisa ukuba iindaba zakho zeendaba zilungile
Kutheni i-Media Pros Kufanele iQaphele i-New York Times Iphutha
Nazi izinto oza kufuneka wazi ukuba ufuna ukuba nguNobhala
Ziziphi iikhowudi zokuziphatha ezifanele ukuba iiNdwendwe zilandele?
Nguwuphi Ulawulo Lwexesha Elilinganayo?
Inkcazo yeLibel - Yintoni Eyenza Into Ekhohlakeleyo?
Iindaba ezilungileyo zoLondolozo lweeNkcukacha zeSikolo: Kukho imisebenzi ngaphandle
Iingcebiso ezi-5 malunga nendlela yokuthabatha amanqaku amanqaku ngexesha loPhando lweendaba
Ukusetyenziswa koLuhlu koBumbe
I-Khanda ichazwa: iSikh Ibble Symbolism
Buyela esikolweni, isitala sePagan
Ngaba iKrisimesi igujwa eChina?
I-Party ye-Teddy Roosevelt ye-Progressive (Bull Moose), 1912-1916
Incwadi yePrasili yeSicilian
Yintoni enokuyilindela kumntu ochazelayo waseTshayina
Ubani Ubhaliso Lombhaliso?
Yintoni i-Newspeak (uLwimi kunye neepapaganda)
Umzila kunye neNgqungquthela yomQala wokuQala: Ukufunda i-Throw Riding Throw
Iintlobo ze-3 zoLwahlulo lweDwala lokunyuka
Biography ka Kate Kate
Apho amaJamani aya kwieholide
I-Académie Française, uModareli wolwimi lwesiFrentshi
Inkcazo kunye nengxoxo ye-Lexical-Function Grammar
Iimpawu, iiNetmetals, i-Metalloids Worksheet
Yintoni iCubic Zirconia okanye iCZ?